Gabadh Yar Oo Ka Yaabisay Madaxweyne Obama Mar Uu Booqday Dugsigooda | Hawraar
September 17, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Gabadh Yar Oo Ka Yaabisay Madaxweyne Obama Mar Uu Booqday Dugsigooda
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama oo booqasho gaar ah ugu tagay, ardayda dugsi hoose oo ka mid ah, kuwa carruurta saboolka ahi dhigtaan ee dawladu ilaalisho, magaalada Washington ayaa waxa sida warbaahintu sheegtay Madaxweynaha ka qabsaday xaalad aanu ku talo galin.
Mid ka mid ah gabdhaha yar yar ee dugsigaas wax ka barta, ayaa markii uu madaxweynaha iyo xaaskiisu soo gaadheen dugsiga, ee ay guda galeen, la sheekaysiga carruurta ardayda ah, waxa ay madaxweyne Obama ku bilowday su’aalo sida markiiba la dareemay kaga khajilsiiyay Madaxweynaha kuwaas oo uu si dareen leh oo oogadiisa laga akhrisan karayo uga jawaabay.
Haddaba waxa su’aalaha gabadhaas yari waydiisay Madaxweyne Obama iyo jawaabihii uu ka bixiyayba u dhaceen sidan.
Madaxweyne waxa na soo booqday adiga?
Obama haa aniga ayaa maanta idin kala soo qayb galay, wakhtigiina maalin nimo ee duruusta aad qaadanaysaan.
Gabadha yar: Laakiin waxa intaanad noo iman la nagu war galiyay in qof muhiim ahi na soo booqanayo, aniguna waxaan moodayay in qofkaasi, fanaanada Beyonce noqon doonto.
Obama inta uu dhoola cadeeyay ayuu yidhi, “Waa runtaa, waa sida ay jecel yihiin, Malia Iyo Sasha isaga oo u jeeda labadiisa hablood.
Gabadhii yarayd ayaa haddana ku tidhi Madaxweyne Obama, laakiin waxa ka sii wanaagsanaatay in qofkii adiga noqday, taasna aad baan ugu faraxsanahay Madaxweyne.
Obama oo mar kale aad u qoslay ayaa ugu jawaabay, su’aal uu iyada waydiiyay, Ma kaa dhabbaa? Haddana iyadoon jawaabin ayuu yidhi, uma malaynayo ee haddii ay run kaa tahay, warbaahinta u sheeg oo ka hor dheh.
Waxa hadalka soo dhex gashay xaaska Madaxweyne Obama Michelle oo gabadha yar ku tidhi, waxaad jeceshahay Byonce, sida dadkuba u jecel yihiin ee waxba ha ka noqon, hadalkaagi hore Mamo, anba kula mid baan ahay oo waan jeclaa inaan arko fanaanada maanta.